Fanentanana momba ny “FIBEBAHAN’ NY POKETRA” araka ny ohabolana 3.9 | Madagascar features website
Friday, August 24, 2012 - 14:51
Teny faneva: “ Mankalazà an’ i Jehovah amin’ ny fanananao” Ohb:3:9
NY “FIBEBAHAN’ NY POKETRA”
I - INONA NO TOKONY HANERY ANAO MBA HANOME HO AN’ NY TOMPO ?
Na dia mandresy lahatra aza ny fampianarana sy ny fanentanana samihafa momba ny amin’ ny hanomezana ho an’ ny Tompo, dia tsy afaka hanatanteraka izany amin’ny fomba pratika hianao raha tsy misy zavatra somary mba manery anao hanome.
Eny fa na dia manatanteraka ihany aza, dia lasa sazy sy enta-mavesatra ilay fanomezana.
Ny hahatonga ny fanomezana ho fiainana anefa no ilaina, ka ireto no zavatra manery anao mba hanome ho an' Andriamanitra :
1 - Fahatsapana fa an’ Andriamanitra ihany ny fananana eo ampelatananao !
Raha tsapanao fa an’ Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary Izy no nanome io harenao io, dia hahafoy ho Azy koa hianao.
Tsy zavatra ampianarina ity fahatsapana ity, fa vokatry ny fihetseham-po sy eritreritry ny tsirairay.
Tadidio fa tsy vola aman-karena fotsiny no nomen’ Andriamanitra anao, fa ny tena sarobidy tao aminy , dia ny Zanany Lahitokana, izay natolony anao maimaimpoana hamonjy anao, izay tsy mba nandoavam-bola na nosandaina akory.
2 - Fisaorana sy fiderana ary fankasitrahana noho ny nataon’ i Jesosy
Tantara iray no entiko isarihana ny saintsika ho amin' izany.
Nisy olona anankiray voaheloky ny lalàna, ka voatazona tao am-ponja nandritry ny 20 taona. Rehefa nahavita iray taona amin’ ny saziny ity olona ity, dia nisy olon-kafa izay tsy fantany akory, anefa dia tonga ka nanavotra azy, ary dia afaka madiodio izy rehefa natao ny fifampiraharahana.
Izany hoe: raha tsy ity olona ity dia tsy maintsy nanefa ny saziny 19 taona sisa izy.
Araka ny hevitrao, dia inona no mety ho fihetseham-pon’ ity olona navotana ity, manoloana ny mpanavotra azy ?
Mety hamaly hianao hoe, faly izy ka misaotra ny olona nanavotra azy, ary ataony fati-drà, ka na inona na inona zavatra tadiavian’ ity olona ity dia tsy maintsy homeny azy, na ny havany.
Eny fa na dia tsy manana izy dia tsy maintsy hitrosa mba ho fanehom-pisaorana azy. Tsy maha onitra ny soa nataon’ ity olona ity aminy izany, nefa tsy maintsy ataony mba ho fankasitrahany azy noho ny soa nataony taminy.
Mihoatra lavitra ny figadrana 20 taona no nahazo antsika, nefa Jesosy nanavotra antsika maimaimpoana teo amin’ ny hazofijaliana. Nanavotra tamin’ ny fahotana, devoly, fahafatesana.
Ankehitriny hianao izao dia lasa olom-baovao ary manana ny fiainana mandrakizay.
Noho io nataony tamiko io, dia tsy maintsy hanome izay rehetra ananako aho hanompoako an’ ny Tompo, ho fisaorako sy fiderako ary fankasitrahako Azy. Salamo:116:12 :
Inona no havaliko an’ i Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko ?
Raha tena Jesosy tokoa no mitoetra ao anatinao, dia tsy hahihitra na himonomonona hianao amin’ ny fandoavam-bola ao amin’ ny Fiangonana, satria io Jesosy lazainao fa ao anatinao io dia tsy hamela anao hahihitra, satria Izy no nanome anao io harena io, ary Izy ihany koa no mitady ampahany aminao hanaovana ny asany.
Ka ny anaovana fanomezana, dia tsy noho izy lalàna fa vokatry ny fahatsapanao ny fahasoavan’ Andriamanitra noraisinao tamin’ ny alalan’ i Jesosy, ka lasa fiainanao ny fanomezana.
3 - Finoana miseho amin’ ny asa.
Tokony haseho amin’ ny asa ny finoana, satria maty ny finoana tsy miasa Jak:2:14-24. Malaza ho manam-pinoana eran’ izao tontolo izao isika malagasy. Koa tokony haseho amin’ ny asa izany finoana izany, amin’ ny alalan’ ny fanomezana ho an'ny asan' Andriamanitra.
Matetika isika milaza hoe : indro ny tenako omeko anao amin’ ny alalan’ ny fanaovana ny hira faha 434 FFPM manao hoe : “ ny tenako rehetra atolotro anao, anao tsy misy fetra anao rahatrizay”. Fa ny poketrako na ny paosiko dia tsy atolotro Anao. Tadidio anefa, fa momba ny tenanao koa ny poketranao sy ny paosinao, ka tokony hiara-hatolotra ho an’ ny Tompo miaraka amin’ ny tena.
Manaraka izany, dia tahaka ny fanahy mila fibebahana koa ny poketra. Zakaiosy no modelin’ ny fibebahan’ ny poketra. Tsy mba ampahafolony araka ny mahazatra no nomeny, fa tena ny antsasany mihitsy (50%) : Lio:19:8-9
Noho izany dia tokony hatao tanjona ity resaka fibebahan’ ny poketra ity satria hita fa tena mbola tsy ampy tokoa.
Izany anefa dia tsy hatao amin’ alahelo, na amin’ ny faneriterena , fa hatao am-pifaliana.
Hoy ny Soratra Masina manoloana izany : “ Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian’ ny fony avy, tsy amin’ alahelo na amin’ ny faneriterena fa ny mpanome amin’ ny fifaliana no tian’ Andriamanitra” 2Kr:9:7
II - ZAVA-NITRANGA TAMIN’ NY TOERANA IRAY NANAOVANAY FANENTANANA
Tamin’ ny 9 May 2006, dia nampianatra tao Ranotsara, any Horombe izahay mivady
Rehefa vita ny fampianarana, dia nisy raiamandreny anankiray nanatona anay tao amin’ ny trano nivantananay, ka hoy izy : Manomboka amin’ izao Pastora dia tena mibebaka aho, hay izay ela izay aho dia tena mpandroba ny fananan’ Andriamanitra .
Hatramin’ izay niainako, hoy izy, dia tsy mbola nanao rakitra mihoatra ny 2000 ariary izany aho, fa ny matetika ataoko dia ny 200, na 500, ka androany aho dia tena menatra, sady nanapa-kevitra fa hijery manokana ny asan' Andriamanitra.
TENY TSARA HOVAKINA : Matio:6:19-21
Ho an' Andriamanitre irery ihany anie ny voninahitra mandrakizay !
Past. Jonah Gabriel